Sida loo soo dejinta YouTube in Pro Goo Final on Mac
> Resource > YouTube > Sida loo soo dejinta YouTube in ay Final Cut Pro on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Ha ii maleynayaa. Waxaad ayaa lagala soo bixi qaar ka mid ah funny videos ka YouTube.com. Markaasay aad u doonayay in uu tifatiraan video YouTube ee aad ugu jeceshahay software video tafatirka - ee Pro Goo Final, saaxiibada la wadaaga. Laakiin waxaa ku xayiran bilowgii aad u - dejinta. Sida loo soo dhoofsadaan YouTube videos in Final Cut Pro on Mac socda Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa iwm?
Pro Goo Final taageerada QuickTime qaabab video ilaa qaraarada HD, laakiin ma FLV. Si aad u dajiyaan YouTube FLV videos galay Pro Goo Final. Conversion ka FLV in MOV waa lagama maarmaan. Waxaanu ku talinaynaa in YouTube Final Cut Pro Converter u Mac . Hoos waxaa ku qoran tilmaan-qaadan bilaabay barnaamijka. Dabagal si loogu badalo YouTube videos in ay Final Goo qaabab saaxiibtinimo Pro.
Talaabooyinka Easy si loogu badalo YouTube video inay Final Cut Pro
Tallaabada 1 : Free download iyo rakibi YouTube inay Final Cut Pro Video Converter u Mac, haddii aadan waxaa weli. Marka laga furay, ku dar YouTube files flv in this Mac YouTube in FCP Converter.
Talaabada 2 : Riix qaab icon ay u Muujin guddiga wax soo saarka iyo dooran Pro Goo Final ka tab ayeey ka. Waad beddeli kartaa goobaha video ay dhacdo in aadan ku qanacsanayn natiijada qaab beddelidda. Laakiin waa laguma talinayo in sidaas la sameeyo. Sababtoo ah goobaha default si fiican u shaqeeya kiisaska oo inta badan dadka ugu badan.
Talaabada 3 : Hit loogu badalo ka furmkidoona YouTube inay Final Cut Pro diinta u Mac OS X.
Markii diinta dhamaystiran, waxaad si toos ah u dajiyaan karaa file in ay Final Cut Pro for tafatirka.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo ay taasi YouTube in FCP Converter u Mac , waxa kale oo aad u bedeli karaan YouTube in ay Final Goo Express, QuickTime, iDVD iyo iMovie on Mac OS X.
Haddii aad ku jirtay oo aan in ilaa hadda, waxaad u baahan tahay xal fiican u soo bixi YouTube video on Mac lacag la'aan ah , oo loogu badalo YouTube (.flv) si ay Final Cut Pro on isticmaalaya Mac YouTube in ay Final Cut Pro Converter. Waxaad tahay meel sax ah.
Free YouTube Downloader for Mac kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi video kasta YouTube fudayd. In Library Free YouTube Downloader ah, waxaad arki doontaa button badalo ah, taas oo lala xidhiidhin karo Mac YouTube ah in ay Final Cut Pro Converter. Waxaa aad ka heli kartaa Converter barnaamijka, ama si fudud halkan kala soo bixi.